"Fa inona no azon’ny olona amin’ny fisasarany rehetra …, izay nisasarany tat? ambanin’ny masoandro? Fa ny androny rehetra dia fanaintainana avokoa, ary ny fisasarany dia fahasorisorena; eny, na dia amin’ny alina aza dia tsy manam-pitsaharana ny fony." Mpitoriteny 2:22,23
"Eny, izaho, … no nomena izao fahasoavana izao, dia ny hitory amin’ny jentilisa ny harenan’i Kristy tsy hita lany."Efesiana 3:8
Nisy nanao fikarohana nanodidina an’i Pompéi, tanàna iray any Italia, difotra tao ambany lavenon’ny volkano Vésuve tamin’ny taona 79. Hita tamin’izany ny taolambalona vehivavy voatahiry tsara, feno firavaka ny tanany roa: haba, rojo, peratra ary kavina tsara tarehy. Azo sary an-tsaina ity vehivavy mpanankarena ity, rehefa nahita ny loza nananontanona, niolomay mba hamonjy izay sarobidy indrindra taminy, nefa nony farany dia tratran’ny lavenona nirotsaka ihany.
Ohatra manaitra izany, maneho ny fifikiran’ny olona maro amin’ny harenany, mandraka ankehitriny! Fantatrao ve fa Andriamanitra dia manolotra anao harena azo antoka, efa anao, ary tehirizin’i Jesosy Kristy, Izay any an-danitra, ho anao? Manana ny fiainana mandrakizay ve ianao, ary miaraka amin’izany, ny fifaliana sy ny fiadanana? Omeny ho an’izay mino Azy tsotra fotsiny izany!
Ary fantatrao ve fa ny fitsarana dia hirotsaka amin’ny tany, toy ny lavenon’ny volkano tamin’izany fotoana izany? Efa roa arivo taona lasa izao no manambara ireo fitsarana hihatra amin’izao tontolo izao ny bokin’ny Apokalypsy, izay nosoratana tamin’ny vanimpotoana nipoahan’ny volkano Vésuve. “Na ny volafotsiny na ny volamenany dia samy tsy hahavonjy azy amin’ny andro fahatezeran’i Jehovah” (Zefania 1:18). Henoy izay lazain’i Jesosy ao amin’ny boky farany ao amin’ny Baiboly: “Dia manoro hevitra anao Aho hividy amiko volamena voadio tamin’ny afo, mba hanankarena ianao, ary fitafiana fotsy hotafinao, mba tsy hisehoan’ny henatrao noho ny fitanjahana, ary ody maso hahosotrao ny masonao mba hahiratanao” (Apokalypsy 3:18). Dia nataonao tsinontsinona ve ireo harena ireo? Raiso amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy izany.